Mpanamboatra sy mpamatsy fitaratra fandroana dobo fandroana - Sinaina fantsom-baravarankely China Pool
10mm lavarangana fitaratra milomano dobo filomanosana
Toughened Glass ho an'ny fandroana pisinina
Sisiny: sisiny maimaimpoana madio sy kilema.
Zorony: ny zoro fiarovana amin'ny radio dia manala ny loza ateraky ny zoro maranitra.
Ny takelaka matevina vita amin'ny vera izay matetika hita eny an-tsena manomboka amin'ny 6mm ka hatramin'ny 12mm. Ny hatevin'ny vera dia manan-danja tokoa.
Ireo vera ireo dia namboarina mialoha niaraka tamin'ny lavaka takiana amin'ny savily sy hidiny. Azontsika atao koa ny manome ny vavahady vita amin'ny habe mahazatra raha ilaina izany.
Rehefa manantona vavahady amin'ny vera hafa ianao dia mila takelaka hinge ity. Ny tontonana vita amin'ny vera dia miaraka amin'ireo lavaka 4 ho an'ny savily vavahady nolavahana araka ny habeny marina amin'ny toerana mety. Azontsika atao koa ny manome takelaka hinge habe ampahana raha ilaina izany.
Manolotra vera matevina 12mm (½ santimetatra) matevina miaraka amin'ny sisiny voalamina sy zoro azo antoka boribory izahay.
12mm matevina tsy misy rafitra matevina maotera Panel
Tora-pasika 12mm matevina misy lavaka ho an'ny hinge
Varavarana vera 12mm